Maitiro ekuita group vhidhiyo kufona kubva WhatsApp | IPhone nhau
Maitiro ekuita group vhidhiyo kufona kubva kuWhatsApp
Mazuva ano tave kumba kwenguva refu, isu takanyanya kusurukirwa kubva kune vamwe vanhu nekuda kwechirwere checoronavirus icho chinoramba chichitapura zviuru zvevanhu pasi rese. Vazhinji vashandisi vanoramba vachitibvunza isu maitiro ekuita iyo boka vhidhiyo kufona kubva kuWhatsApp, saka ngatione zvakadzama matanho ekuti uite iyi mhando yevhidhiyo kufona.
Vashandisi vane zvigadzirwa zveApple vanogona kunatsiridza basa iri nekushandisa FaceTime yakananga, muchokwadi tinokurudzira kushandiswa kwayo kwemavhidhiyo kufona mazuva ano asi kana nhengo yemhuri kana shamwari haina Apple chishandiso, FaceTime haigoneke kuita.
1 Vanosvika vanhu vana pavhidhiyo yekufona
2 Maitiro ekuita WhatsApp vhidhiyo mafoni
Vanosvika vanhu vana pavhidhiyo yekufona
Mumwe wemitemo wakatemerwa nesocial network ndeyekuti huwandu hwakanyanya hwevanhu vakabatana nevhidhiyo yekufona vana, isu nevaenzi vatatu. Chokwadi ndechekuti kana ukasarongeka zvakanaka mumhando idzi dzekufona zvinogona kuita mhirizhonga kunzwisisana, saka zvakanakisa kuti usaunganidze vanhu vazhinji kunyangwe isu tichiziva zvechokwadi kuti pane zvimwe sarudzo zviripo zvekujoinha vanhu vazhinji. Imwe yacho ndeye SKype, multiplatform sevhisi uye zvirinani kupfuura WhatsApp munzira dzese asi pamwe chimwe chinhu chisingawanikwe zvakanyanya kune vakuru vedu kana vachifanira kugadzira account, nezvimwe ...
Kune rimwe divi, muFaceTime muganho wevanhu vakakokwa wakanyanya kukwirira uye nerudzi urwu rwekufona isu tinongoda kuve neApple zvishandiso ne iOS 12.1.4 kana iPadOS pane iPhone 6s kana gare gare, iPad Pro kana gare gare, iPad Air 2 kana gare gare, iPad mini 4 kana gare gare, kana iPod touch (yechinomwe chizvarwa). Vakwegura iPhone, iPad uye iPod touch mamodheru anotsigira iOS 7 anogona kujoina Group FaceTime mafoni uye kutora chikamu ne odhiyo chete.
Maitiro ekuita WhatsApp vhidhiyo mafoni
Zviri nyore. Matanho acho anotevera:
Isu tinopinda yedu WhatsApp> Isu tinoenda kunofona mubhawa repazasi> tobva tatarisa kumusoro kurudyi pachiratidzo chefoni ne + chiratidzo> Tinodzvanya pakanyorwa kuti group group kufona> tinowedzera vanhu (3 max)> kana tangowedzera vanhu vatatu tinodzvanya kamera inooneka padyo nefoni> yakagadzirira.
Tinogona zvakare kugadzira boka rekuteerera nekutsikirira parunhare padanho rekupedzisira, izvo zviri kumusoro kwesarudzo yemunhu wese. Chinhu chakanakisa nezve izvi ndechekuti hazvidi kuti uve neApple chishandiso kuti uite vhidhiyo kufona, asi isu tinogona kuti ndizvozvo 4 vanhu vangave vashoma muzviitiko zvakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuita group vhidhiyo kufona kubva kuWhatsApp
Nyowani Apple Tambo tambo uye iPhone kesi
Apple ichavhura iOS 13.4 munaKurume 24 kupa Trackpad rutsigiro kune iPads